Myanmar Steemit ကျေးရွာသို့ ဒုတိယအကြိမ် အလည်သွားခြင်း -အပိုင်း- ၅ ( ခေတ်စမ်း ) ( Henry Aung ) — Steemit
Myanmar Steemit ကျေးရွာသို့ ဒုတိယအကြိမ် အလည်သွားခြင်း -အပိုင်း- ၅ ( ခေတ်စမ်း ) ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် ဤသို့ သရော်စာများ ရေးသားရခြင်းမှာ MSC members များအား ပျော်ရွှင်စေရန် အလို့ငှာသာ ဖြစ်၍ မည်သူ တဦးတယောက်အား မျှ ထိခိုက်စေရန် မရည်ရွယ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်တော်၏ အရေးအသားများသည် အဂါရဝ ဖြစ်စေသော အရေးအသားများ ဖြစ်ခဲ့လျင်သော်လည်း ကောင်း အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် MSC members များ မနှစ်သက်ခဲ့ လျင်သော်လည်ကောင်း ကျွန်တော့ အနေဖြင့် တာဝန်ယူ၍ မိမိ သရော်စာအား ပြန်လည် ပြုပြင်ပေးပါမည်။
" မယ်ကြည့် အစွမ်း ကမ္ဘာကိုလွမ်းစေရမည်" ကျွန်ုပ်လည်း ဆိုင်းဘုတ်အား ကြည့်ကာ အတန်ကြာအောင် တွေးတောနေမိ၏။ ထိုစဉ် ချိုသာသော အသံ တခုထွက်ပေါ်လာ၏။ အဘယ်သို့သော ချိုသာ ခြင်းနည်း။ ရှင်းပြပါအံ့။ ဆေးသကြား ၊ ကြံသကာ ၊ ပျားရည် ၊ ထန်းညှက် တို့အား ရောကြိုထားသည့် အချိုရည်အား ကြံရည် အတွင်း ထည့်သောက်ရသကဲ့သို့ ရှိ၏။
ဤသို့ ချိုသာသော နှုတ်ထွက်စကားတို့ကို ပြုသူ မှာ အသူနည်း။ မယ်ကြည်ဖြစ်၏။ " ဪ... ကိုဟင် ရောက်နေတာကိုး၊ အထဲကို ဝင်ခဲ့လေ.... နေပူထဲကလာတာ ပင်ပန်းနေရောပေါ့ ။" စသည်ဖြင့် ဧည့်ဝတ်ပြု၏။ ကျွ်နုပ်လည်း အလည်သက်သက်သာ ဖြစ်ကြောင်း မယ်ကြည့်3in 1 အထည်စများအား စပ်စုလို၍ သာ လာရောက်ကြောင်း ရှင်းပြရ၏။
ရက်ကန်းရုံ အတွင်း၌ကာ အရည်အသွေးစုံလင်သော ပိတ်အဝတ်များ ရက်လုပ်နေကြ၏။ မယ်ကြည်လည်း ကျွ်နုပ်အား ရှင်းပြပါ၏။ မယ်ကြည်မှာ အကြံပိုင်ရုံသာမက ခေတ်မှီသော မယ်ကြည်လည်း ဖြစ်သောကြောင့် သူရှင်းပြသည်များကို နားလည် သည်လည်း ရှိ၏ ။ နားမလည်သည်က သာ၍ များ၏။ " လူဒိုင်း လူဒိုင်းမှာ ဒီဇိုင်းကာလာ ဘာညာ အနေအထား ဆိုတာရှိတယ် ကိုဟင်ရဲ့ " ဟုအစချီကာ သူ၏3in 1 အထည်စတို့အား ချီးမွမ်းခန်း ဖွင့်၏။
ထို့နောက် အမျိုးသမီးများ အတွက်သာမက အမျိုးသားများအတွက်လည်း နောက်ဆုံးပေါ် ဒီဇိုင်း ပုဆိုး အသစ် ထွင်ထားကြောင်းလည်း ပြောပြ၏။ မိမိအားလည်း ထိုနောက်ဆုံးပေါ် ပုဆိုး တထည် လက်ဆောင်ပေး၏။ ကျွ်နုပ်ကာ ဝမ်းသာမဆုံးရှိချေပြီ။ ကျွ်နုပ်လည်း သူပေးသော ပုဆိုးအား ဖြန့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဘုရားတရလေတော့၏။ ရှု့လော မိတ်ဆွေ။ ပုဆိုးမှာ တထည်လုံး ကျပ်ဝိုင်း နီးပါးခန့်ရှိသော အပေါက်များ ဖေါ်က်ထား၏။
ကျွ်နုပ်လည်း မေးရလေတော့၏။ " မယ်ကြည် .... ညည်းပုဆိုးက တထည်လုံး အပေါက်တွေချည်းပဲကော" ကျွ်နုပ် အမေးအဆုံး ၌ကာ မယ်ကြည်၏ မျက်စောင်းထိုးခြင်းကို ခံရ၏။ ခေတ်နောက်ကျရန်ကော ဟူသော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်ခံရ၏။ မယ်ကြည်၏ ဖြေရှင်းချက်အား နားထောင်ပါလော့ မိတ်ဆွေ။ ခေတ်အမြင်ရှိသော မယ်ကြည် ၊ တီထွင် ကြံဆ ညာဏ်ရှိသော မယ်ကြည် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါအံ့။
" ကိုဟင် ...ဒီပုဆိုး တထည်ကို 50 SBD နဲ့ရောင်းတာ ။ ကိုဟင်တို့ ယောက်ျားလေးတွေ ဂျင်းပန်တောင် တမင်ဖြဲ ပြီး ဝတ်သေးတာပဲ။ ခေတ်... ကိုဟင်ရဲ့ .. ခေတ်။ ဘယ်သူမှ မထွင်ခင် မယ်ကြည် အရင် ထွင် လိုက်တာ... ပုဆိုးမှာ အပေါက်ပါတော့ လေဝင်လေထွက်ကောင်း တယ်။ လေဝင်လေထွက် ကောင်းတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်းဆို ရာသီဥတု ပူလာပြီ မလား...နောက်ပြီး ကိုဟင်တို့ ရှူရှူး ပေါက်ရင် ကရိကထ မများတော့ဘူးပေါ့။ " ဤသို့ ရှင်းပြပြီး သကာလ " ကိုဟင်တို့များ ခေတ်အမြင်ကို မရှိဘူး " ဟုလည်း အငေါ်တူးလိုက်သေး၏။
ဟုတ်ကဲ့.... ကျွ်နုပ်လည်း ဟုတ်ကဲ့ဟုသာ ပြန်ဖြေနိုင်လေတော့၏။ ကျွ်နုပ်ကာ ခေတ်နှင့်အညီ မလိုက်နိုင်သူပါတည်း။ ကျွ်နုပ်လည်း အနှီး SBD 50 တန်သော ခေတ်မှီ ပုဆိုးအား ဝတ်နိုင်ရန် အတော်ပင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ် ကြောင်းလည်း သဘောပေါက်မိ၏။ ရှိစေတော့ ။ မိမိကာ ဘိုးတော်ဘုရား လေးဖက်ထောက် ခေတ်တွင်ကျန်နေခဲ့သူ ဖြစ်၏။
ကျွ်နုပ်လည်း မယ်ကြည်အား နုတ်ဆက်၍ သူ၏ ရက်ကန်းရုံမှ အမြန်ထွက်လာရ၏။ မထွက်လို့ကလည်း မဖြစ်။ မတော် " ကိုဟင် ကျွန်မလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ပုဆိုးလေး ဝတ်ကြည့်စမ်းပါ ။ ကိုဟင်နဲ့ လိုက်မလိုက် ကြည့်ချင်လို့ " ဆိုလျင် ခက်ရချည်သေး။ ကျွ်နုပ်လည်း ခေတ်မှီသော မယ်ကြည် အကြံပိုင်သော မယ်ကြည် အပြောချိုသော မယ်ကြည်ထံမှ ပြန်လာသော် ရွာလည် လမ်းမတွင် မြန်မာ steemit ရွာ၏ တဦးတည်းသော ကန်ထရိုက်တာ @yuzana ယုဇန ( ဘုရင့် တဘဲ့ ) ဖြင့် တွေ့လေ၏။
ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့) ကာ အဘယ်သို့သော ကန်ထရိုက်တာနည်း။ ရှင်းပြပါအံ့။ အဆောက်အဦး ၊ လမ်း ၊ တံတား ဆောက်သော ကန်ထရိုက်တာလော။ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ steemit ရွာ တခုလုံး၏ အိမ်သာ ဆောက်လုပ်ရေးအား ကန်ထရိုက်ယူ၍ ဆောက်လုပ်ပေးနေသော အိမ်သာ ကန်ထရိုက်တာဖြစ်၏။
ဤသို့ဆိုလျင် ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့ ) ဟူသောအမည်မည်သို့ရလာသနည်း။ သူ၏ ကုမ္ပဏီ ဆိုင်းဘုတ်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားခြင်း ဖြစ်၏။ Yuzana ( Bring the Best ) ။ ဆိုလိုသည်မှာ ယုဇန မှ အကောင်းဆုံးကို ယူဆောင်ပေးသည် ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ် ထွက် စေရန် ဖြစ်သော်လည်း bring the best ဟူသော အင်္ဂလိပ်အသံထွက်အား မြန်မာ steemit ရွာသားတို့ မြန်မာမှုပြုလိုက်သည်မှာ ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့) ဟူ၍ ဖြစ်ရရှာလေတော့၏။ ရှိစေတော့ ။ ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့ ) ကာ တော်ရုံ ဓနိမိုး ထရံကာ အိမ်သာဆောက်သူ မဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီ အိမ်သာဆောက်သူဖြစ်၏။ အဘယ်သို့သော ခေတ်မှီခြင်းနည်း။ ရှင်းပြပါအံ့။
သာမန်လူတို့ အိမ်သာတက်လျင် အနည်း ဆုံး ၃ မိနစ်ခန့်ကြာ၏။ လူတယောက် ၃ မိနစ် တရက်လျင် ၂ ကြိမ်တက် ၆ မိနစ်။ လူ၁၀ ယောက်လျင် တရက် မိနစ် ၆၀ ။ တပါတ် လျင် ဘယ်လောက် တလလျင် ဘယ်လောက်ဟူ၍ တွက်ချက်ကြည့်ရာ steemit ရွာသားတို့မှာ အိမ်သာတက်ရင်း အချိန်ကုန်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသောကြောင့် အိမ်သာတက်သော အချိန်တို့ မဆုံးရှုံးရအံ့ငါ မြန်မာ steemit ရွာသူရွာသားများအတွက် ခေတ်မှီ အိမ်သားများ ဆောက်လုပ်ပေးနေခြင်း ဖြစ်၏။
သိုင်းဆရာ @domelay အတွက် အိမ်သာတက်ရင်း အချိန်မကုန်ရအံ့ငှာ အများတူငှာနှင့်မတူသော အိမ်သာဆောက်ပေး၏။ အိမ်သာတက်ရင်း သိုင်းကျင့်နိုင်၏။ အခြာသူများ၏ အိမ်သာတွင် အလေးစွန့်ရန် အပေါက် တခုသာ ပါသော်လည်း @domelay ၏ အိမ်သာတွင် အပေါက်သုံးခုပါ၏။ ထိုအပေါက်များမှာလည်း အမြဲတစေ ရွေ့လျားနေကြသည် ဖြစ်၍ ဒိုမီလေးမှာ အပေါက်တည့်အောင် လိုက်ချိန်ရင်း ကိစ္စပြီးရသဖြင့် သိုင်းကျင့် ပြီးသား ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်၏။
ဟုတ်သား။ အပေါက်တွေက ရွေ့နေမှ ဖြင့် ဖင်တယမ်းယမ်း နှင့် ဆိုတော့ သိုင်းကျင့်သည်နှင့် တပုံစံတည်း ဖြစ်၏။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဒိုမီလေးလည်း အပေါက်ချိန်စရာ မလိုတော့ဟုကြားရ၏။ သမာဓိ အားကောင်းလာသည် ဖြစ်တန်ရာ၏။ အီလက်ထရောနှစ် ပြင်ဆရာ @komoezaw မိုးဇော် အတွက် ဆောက်ထားပေးသော အိမ်သာမှာ အလွန်ခမ်းနား၏။
အဲကွန်းလည်း ပါ၏။ အိမ်သာတက်ရင် လျပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပြင်နိုင်၏။ တခုသာပြသနာရှိ၏။ မိုးဇော်မှာ မေ့တတ်သူဖြစ်သောကြောင့် ကိစ္စပြီးလျင် ခဲဆော်သော ဂေါက်အား ရေပိုက်နှင့် မှား ပြီး ထိုးသဖြင့် မကြာခဏ အပူလောင်ရသော ပြသာနာတခုသာရှိ၏။
အပျိုကြီး @eieikhing ၏ အိမ်သာမှာ အထူးဆန်းဆုံး ဖြစ်၏။ အိမ်သာတခုလုံးအား ကြည့်မှန်များ တပ်ထားပေး၏။ အိမ်သာတက်လျင် တကိုယ်လုံး မြင်နိုင်၏။ အိအိခိုင်ကလည်း အလွန်သဘောကျလေ၏။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ။ အိမ်သာတက်ရင်း အလှပြင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။
ထို့အတူ သူ့အိမ်သာထဲတွင် အလှပြင်ပစ္စည်း အစုံလည်း ရှိ၏။ အလှအပ ကြိုက်သူတို့ အပျိုကြီး အိအိခိုင်၏ အိမ်သာတို့ သွားတက်ကြပါကုန်။ ရွာခံလူမိုက် @thatkozaw သက်ကိုဇော်၏ အိမ်သာမှာ သူတယောက်တည်းမှလွဲ ပြီး မည်သူမျှ တက်၍ မရသော အိမ်သာ ဖြစ်၏။
ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့) မှ ခေတ်မှီ နည်းပညာ sensors များထည့်၍ ဆောက်ပေးထားသောကြောင့် ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့ကြောင့် sensor များထည့်ထားရပါသနည်း ဟုဆိုသော် သက်ကိုဇော်မှာ လိပ်ခေါင်း ဝေဒနာခံစားနေရကာ အိမ်သာတက်၍ လိပ်ခေါင်း ထွက်လာသည်နှင့် sensor မှ သိရှိပြီး ချက်ချင်း သာရေကွင်းနှင့် ပစ်သော စနစ်ထည့်သွင်းထားပေးခြင်းဖြင့် လိမ်ခေါင်း ဝေဒနာအား ကုစားပေး၏။ အလွန်ခေတ်မှီ အဆင့်မြှင့်သော အိမ်သာဖြစ်၏။
ထို့ အပြင် ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့ ) မှာ မြန်မာ steemit တရွာလုံးရှိ အိမ်သာများအား စာတန်းတခုပါသော စတစ်ကာ ကပ်ပေး၏။ သန့်ရှင်းပါ ဟူသော စတစ်ကာလော။ မဟုတ်ပါ။ ကိစ္စပြီးလျင် ရေလောင်းပါ ဟူသောစတစ်ကာ လော။ မဟုတ်ပါ။ သူကပ်ထားပေးသော စတစ်ကာမှာ " အိမ်သာတက်၍ လုပ်စရာမရှိလျင် steemit သုံးပါ " ဟူတသတ်။ ဤ စတစ်ကာ ၏ အကျိုးဆက်မှာ အံ့ဖွယ် ဖြစ်၏။ စတစ်ကာ မကပ်ခင်က မြန်မာ steemit ၏ promotion post များ ၅ ခု ၆ ခု ခန့်သာ ရှိရာမှ ထို စတစ်ကာ ကပ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရက်လျင် post ၂၀ ခန့်မျှ တဟုန်ထိုး တက်သွားသောဟူ၏။ ကျေးဇူးကြီးမားပေစွ။
ဟုတ်ကဲ့။ " အိမ်သာတက်၍ လုပ်စရာမရှိလျင် steemit သုံးပါ။
ပုံ / ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့ )
( ဘုရင့် တပည့် ဟုရေးရမည် ဖြစ်သော်လည်း အသံထွက်အတိုင်း ဘုရင့်တဘဲ့ ဟူ၍ ရေးသားထားသည်ကို ခွင့်လွတ်ကြပါကုန်။)
ကျန်ရှိနေသေးသော Myanmar Steemit ကျေးရွာသူ ရွာသားများ အကြောင်းကို နောက်ဆောင်းပါးတွင် ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
myanmar community satire
စွန့်ဦးတီထွင် G2 တခွင် ပါလား ။ Congratulations ! Bravo ! Felicidades! Omedetōgozaimasu! အစရှိသဖြင့် ရှိသမျှသော ဘာသာစကားများနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ မမကြည်နဲ့ ဦးဦးယုရေ..။ 💓😄💓😄
ဦးယု အိမ်သာ ခေတ်မှီချက်ကတော့ ရှယ်ပဲ။
ဟိ နောက်တခါတော့ steemit ရွာသူတွေတွက် တီထွင်အူးမှပါ🤔🤔😁
စွန့်ဦးတီထွင် G2 တခွင်
ဖင်းကားပရင့် မဟုတ်ဘူးပေါ့ ကသက် အိမ်သာက။ ဟိုဟာပရင့် ဖြစ်နေတာပါလား။ 😂
ဒါနဲ့ ဒိုမီရဲ့ သန့်စင်ခန်း သိုင်းက လန်းမယ့်ပုံဟ
thatkozaw (57) ·3months ago
ကမ္ဘာ​ပေါ်တွင်​ရှိရှိသမျှ​သော ဘာသာ​ပေါင်းစုံမှ ဘုရားများကယ်​​တော်​မှုပါ
လမ်းကြုံသဖြင့် သရေပင်နှင့် ၀င်ပစ်ပီ ခဲ့သည် မှန်လရော့ဟယ်--- ရွှစ်--- ဟာလွဲသွားပီ ဘယ်နေရာမှန်တယ်တော့ မကြည့်ရဲလို့ မကြည့်တော့ဘူး ဟိဟိ။
သာရေကွင်းတွေ ရမယ် သာရေကွင်းတွေ
အာ့လို အော်မှ လိပ်ခေါင်း တကယ်ထွက်မှာ
ဟုပ်​ပါ့ ဆရာဟင်​​ရေ ကျွန်​​တော်​ကန်​ထရိုက်​လုပ်​မှ နိုမိုဆို မနက်​မိုမလင်းတလင်း ​​ရွာအပြင်​ဘက်​ထွက်​ပါကြရတာ ပုဆိုခြုံ ငုတ်​တုပ်​က​လေး​တွေ အီးပုံကလဲ သိုင်းကွက်​နင်းသလို​ရှောင်​ရတယ်​ ဟားးးးးး
ဟုတ်ကဲ... ယုဇန ( ဘုရင့်တဘဲ့ ) ဆိုတဲ့ အတိုင်း အကောင်းဆုံး အိမ်သာ ဆောက်ပေးနိုင်ပါစေ
အဟီး😁😁ရယ်ရတာ မျက်ရည်တောင် ကျတယ်လို့ မယ်ကြည့် ပုဆိုးလေး ဝတ်ပြီး selfie ဆွဲပြီး profile change ပေးဘာလို့😁
အဲပုဆိုး ဝတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပါ အုံးမယ်။
ဖျားဖျား ကိုယ့်အလည့်တော့ပြီးသွားရှာပြီ ကိုမိုးဇော် အပူလောင်တာဘယ်နားလဲ မေးကြည့်ဦးမှပါ ။ မယ်ကြည်ပုဆိုး နဲ့လွဲပါစေ ဦးယုလဲ ကျေးဇူးပါလို့ အိမ်သာတက်သိုင်း တစ်မျိုးတိုးတတ်လာလို့ ခ်ခ် ။
komoezaw (60) ·3months ago
တောင်ကြီး msc ပွဲကျရင်3in 1 ပုဆိုးလေး ဝတ်ခဲ့ပါ
ခွေးတစီစီ တော့ ဖြစ်တော့မှာပဲ။
ဟား ကိုဟင်ရယ် စတီးမစ် ရွာသားတွေ အတွက် အထူးစပါယ်ရှယ် လေးတွေ ရေးထားလိုက်တာ ဖတ်ရင်းနဲ့ကို ရီရတာ ရပ်လို့မရဖြစ်နေရတယ်ဗျာ။ လက်စွမ်းကတော့ ထက်ပါ့ ။ နောက်လာမည့် စတီးမစ်ရွာသားတွေရဲ့ အထူးပြုလေးတွေ ဖတ်ဦးမယ်ဗျ။
အဲလိုပဲ ကိုရွှေဘို... ကျွန်တော့ ဦးနှောက်ကလည်း ပေါက်ကရ အတွေးဆို ထွက်ပါ့။ စာကောင်း ရေးရင်သာ မရတာ...
moewaikamawet (49) ·3months ago
eieikhing (54) ·3months ago
အဲလိုပဲ ညီမရေ.... စာကောင်းပေမွန် ရေးရင် ဦးနှောက်သိပ် မထွက်ချင်ဘူး။ ပေါက်ကရ အတွေး တွေဆို ထွက်ပါ့။
aunggyi100 (54) ·3months ago
ကိုသက်​​တော့ အိမ်​သာတက်​ရင်း အဆင်​​ပြေ​နေ​လောက်​ပီ😂
ကိုမိုး လာယူပါလေ လက်ချောင်တေ ပေးနာဘာ😁
ng-chitsonelay (42) ·3months ago
အက်မင် ဒိုမီ အပေါက်ချိန်😂😂😂
ဘုရင့်​တပည့်​ ​တော်​ချက်​ ကိုသက်​ အိမ်​သာ​တော့ သွားမတက်​ရဲ​ပေါင်​ ဟီးဟီး
ထိပ်ကွက်စီးပွားရေးဆရာတွေပဲ ဘုရား ဘုရား
ပုဆိုးဝတ်တဲ့ပုံကို စိတ်ထဲ မှန်းကြည့်တာ မတွေးရဲစရာဘဲဗျ hee hee
chitsone (50) ·3months ago
magway-minbu (26) ·3months ago